GRC Stripe panel-GRC Stripe panel-Nanjing BeiLiDa New Materials System Engineering Co., Ltd.
I-GRC ephezulu yokuphela
GRG Acoustic Board
Iphaneli yokuvuselela i-GRC ebuye ivutha amalangabi
I-TCP Art Simulation
Iphaneli eyenziwe ngemvilophu esele yenziwe
Amacala we-China Project
Amacala we-Overseas Project
Iphaneli yomugqa we-GRC
Ulapha : Ikhaya>Product>I-GRC ephezulu yokuphela>Iphaneli yomugqa we-GRC
Indawo Origin: INanjing, Jiangsu, China
Igama Brand: Beildia
Inombolo Model: Ibhodi lomugqa le-GRC
I-GRC (ukhilimu oqinisiwe kakhonkolo) isebenzisa usimende usimende njengokwenza izinto eziyisisekelo, futhi isebenzise i-alkali engazweli ingilazi fiber yokuqinisa ukusebenza kwe-GRC. Inqubo yokukhiqiza ye-GRC uhlobo olukhethekile. Sebenzisa i-airbrush ukufafaza inhlanganisela kasimende ne-fiber fiber ku-mold preabricate, kungathuthukisa ukubumbana, amandla, nokumelana nokuqhekeka komkhiqizo ngenkathi kuqinisekiswa ukuthungwa kwento.
Ikhwalithi yomkhiqizo okhiqizwe ngale ndlela ihlukile kakhulu kunenqubo ejwayelekile yokubumba ukhonkolo. EYurophu naseMelika, ishidi le-GFRC elilodwa-elingqimba lisebenzisa kabanzi njengebhodi langaphandle lokuhlobisa udonga.
Performance Izidingo zesikhombi
Ukuthenga ngokulingana kwamandla amakhulu / MPa Inani eliphakathi 7
Ubuningi bebhulokhi eyodwa 6.2
Amandla wokugoba wokugcina / MPa Inani eliphakathi 18
Ubuningi bebhulokhi eyodwa 15
Amandla emiphumela / kJ / M2 8
Ukuqina kwevolumu (eyomile) / g / cm3 1.8
Ukufakwa emanzini 14
Ukumelana neqhwa Ngemuva kwemijikelezo engama-25 yemisebe yeqhwa, akubanga khona ukuqola, ukushelela kanye nezinye izinto ezonakele.
1. Ubuningi beplastiki. Sebenzisa ngokuphelele ubuchwepheshe bedijithali obusezingeni eliphakeme obuthathu, ukuze umkhiqizo ubeke kahle imodeli, futhi ngasikhathi sinye uveze umphumela wokuhlobisa wokwakha nezimpawu zokubukeka kunoma yimuphi umbala, imodeli noma ukuthungwa.
2. Ukusebenza okuhle kakhulu kokuvikela umhlaba. Ngokuthatha uhlelo lokuvikela oluphelele, umsebenzi wokulwa nokuzihlanza ubonwa ngenkathi umsebenzi ongamanzi omkhiqizo uqinisekiswa, nokuqina komphumela wokubukeka komhlobiso wokwakhiwa kuyathuthukiswa.
3. Ukuqina okuhle. I-fiber ephezulu ye-PVA ye-elVA isetshenziswa njengezinto zokuqinisa ezingezekeli zesendlalelo se-GRC, futhi i-PP fiber isizwa ukuthuthukisa ukumelana okuncane kweleyisi engaphezulu, ngaleyo ndlela ithuthukise ukuqina kwemikhiqizo nokwandisa impilo yenkonzo yezakhiwo.
4. Udonga olukhanyayo noluncane. Ukusungulwa kungabona izici zamapuleti amakhulu nezindonga ezacile, kunciphise kakhulu ukuthwala kwemithwalo, kuvunyelwe ukusetshenziswa kwemikhiqizo ezindongeni zangaphandle zezakhiwo eziphakeme, kuvunyelwe ukwakheka kwezakhiwo kube nezimo futhi kube nokugqama okugqamile.
Ukulondolozwa kwamandla nokuncipha kokukhipha: uma kuqhathaniswa nezinye izakhiwo ezivalekile, i-GRC isebenzisa amandla amancane ohlelweni lokwakha nokufaka. Izazi zaseJapan zenze ukuqhathanisa ukuphuma kwekhabhoni phakathi kwebhodi le-GRC wallboard nokuqiniswa kodonga kokhonkolo okuqinisiwe, futhi ukusetshenziswa kwebhodi ye-GRC wallboard kunganciphisa ukuphuma kwekhabhoni ngo-30%.
Itshe lomgede wokulingisa we-GRC
I-GRC Ukulingisa okusanhlamvu
Umphumela we-GRC Pping
Copyright © 2020 Nanjing BeiLiDa New Equipment System engine Co, Ltd.